Dhaawaca Ousmane Dembele oo 10 milyan ka hor istaagaya Borussia Dortmund – Gool FM
Dhaawaca Ousmane Dembele oo 10 milyan ka hor istaagaya Borussia Dortmund
Liibaan Fantastic September 18, 2017
(Dortmund) 18 Seb 2017 Borussia Dortmund ayaan la dhicin dhaawicii soo gaaray laacibkoodii hore ee Ousmane Dembele kaas oo xaggaagii ku biiray Barcelona.
Heshiiska Barcelona ay kula wareegtay Dembele waxaa ku jira qodob dhigaya in kooxda reer Spain ay bixiso 10 milyan oo euro haddii laacibku uu kooxda u ciyaaro 50 kulan xiliciyaareed kan sida ay baahisay AS.
Laakiin dhaawaca soo gaaray ayaa ka dhigaya laacibka inaysan suurogal u ahayn inuu u safto kooxdiisa ilaa sanadka cusub, wayna adagtahay in kulamada uu u ciyaarayo Barca xiliciyaareed kaan ay gaaraan 50 kulan maadama uu maqnaanayo bilooyin dhawr ah.
Sidoo kale heshiiska waxaa qayb ka ah in Barcelona ay bixinayso 10 milyan oo euro haddii ay ku guulaystaan Champions League 5-ta sano ee soo socota.
Ousmane Dembele ayaa u duulay Finland si uu halkaas ugu maro qaliinka uu uga soo caafimaadayo dhaawicii soo gaaray.
Kooxda Juventus oo tababarkii la tagtay garoonkeeda caadiga ah + Sawirro
''Bonocci Juve ugama soo tegin Allegri dartii'' - Xaaska Bonucci oo waxyaabo badan daboolka ka qaadday!